Maxaa keenay fashilka howlgalkii Ciidanka DF ee Sh/Dhexe? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa keenay fashilka howlgalkii Ciidanka DF ee Sh/Dhexe?
Muran iyo wada-shaqeyn la'aan u dhaxeeya Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa caqabad ku noqday howlgal militeri oo mudo bil ah ka socday Sh/Dhexe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Khilaaf u dhaxeeya Taliska Ciidanka xoogga dalka iyo midka AMISOM ayaa dhabarjab ku noqday howlgal militeri oo 23-kii bishii May ka billowday gobolka Shabeellaha Dhexe.
Howlgalka oo mudo bil ah ka socday gobolka ayaa kusoo dhamaadey fashil, waxaana dowladda looga dilay askar iyo Saraakiil badan oo uu kamid yahay taliyihii ururka lixaad ee Ciidamadda Gorgor Maxamed Cabdiwaaxid.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage iyo taliyaha AMISOM Lt. Gen. Diomede Ndegeya ayaa isku khilaafay qaabka loo fulinayo howlgalka oo ahaa mid ballaaran oo la doonayay in Al-Shabaab looga saaro gobolka Sh/Dhexe.
Brig. Gen. Telesphor Barandereka oo ah taliyaha Ciidanka Burundi ee qeybta ka ah AMISOM, kuwaasoo qaabilsan Shabeellaha Dhexe ayaa ku eedeeyay taliye Odowaa inuu isku koobay howlgalka, islamarkaana uu ka gaabiyay wadasshaqeyn iyo wada-tashiyo inuu kala sameeyo Saraakiisha askarta Midowga Afrika.
Taliyaha Ciidanka Burundi ayaa intaasi ku daray in Jen Odowaa uu diiday inat Ciidanka DF kala wareegaan AMISOM afar saldhig oo ku kala yaalla Golooley, Ceel-Baraf, Buurane iyo Mir-taqwa, taasoo u sahli lahayd inay sameeyaan askar u diyaarsan inay dagaalka ka qeybgasho.
Laakiin, Afhayeenka Ciidanka xoogga dalka Cali Xaashi Cabdinuur oo la hadlay VOA ayaa beeniyay inuu jiro khilaaf u dhaxeeya taliskooda iyo midka AMISOM, isagoo xusay in aan lagu soo wargelin saldhigyo Ciidanka Burundi ay rabeen inay ka guuraan, oo la iyaga laga doonayay inay kala wareegaan.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage ayaa ku eedeeyay Ciidanka Burundi inay si caajis ku jiro ay u wajahayaan Al-Shabaab, oo uu sheegay in iska fadhiyaan saldhigyadooda, oo aysan doonaynin inay horey u dhaqaaqaan.
Ciidanka Burundi, ayaa meel 13-KM ay biyaha diyaarado uga soo qaataan, iyagoo aan dooneynin inay furaan wadooyinka ay xirtay Kooxda Al-Shabaab, taasoo keentay inay Ciidanka dowladda Soomaaliya qaadaan howlgallo kiligood ah, sida uu sheegay Jen Odowaa.
Mudadii halka bil uu howlgalka socday, Ciidanka waxey ku gaareen degaannada War dhagax, War-Ciise, Gaal-leef, Qoor-dheere, Jilable iyo Cali Fooldheere, kuwaasoo laga saarey wareegeen Al-Shabaab.
Ciidanka AMISOM ayaa ku tilmaamay howlgalka mid fashilmay, waxaana hadalkaasi ka falceliyay Jen Odowaa oo warqad ashtako ah u qoray madaxa Howlgalka Midowga Afrika Francisco Madeira, isagoo u sheegay in hadalkaas uu sawir qaldan ka bixinayo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
AMISOM ayaa dhawaan ka baxday labo Saldhig oo ku yaalla Afgooye iyo Marin-gubaay oo katirsan gobolka Shabeellaha Hoose, waxayna tani fursad wayn siisay Al-Shabaab oo la wareegaya boobaha ay baneynayaan Ciidanka Midowga Afrika.
Ciidanka AMISOM waxay Soomaaliya ka howlgalayeen tan iyo 2007, waxayna illaa hadda awoodi waayeen iyagoo tiradoodu gaareyso 22,000 oo askari oo ka socda Burundi, Uganda, Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya inay ka saaraan Al-Shabaab guud ahaan dalka.